Nderupi Rudzi rweWiricheya Mota Rakandinakira? | Karman® Mawiricheya
Nderupi Rudzi rweWiricheya Mota Rakandinakira?
Posted on July 19, 2013 January 22, 2021 by csr 1687
Kusarudza kuti ndeipi mhando yemotokari inowanikwa yekutyaira kana kushandisa kutakura ndiko zvakaoma. Iwe unogona kugadzirisa chero chero mhando yemotokari yekuwana inosvika kutakura. Verenga zvimwe kuti udzidze zvakanakisa wiricheya mota yemhuri, mabhizinesi, kana zvifambiso zveruzhinji.
hwiricheya minivans dzinobuda kumusoro sedzakanakisa wheelchair mota kumativi ose. Ivo vanopa anodhura mitengo, yakawanda yemukati nzvimbo, yakakura gasi mileage, nekukurumidza kuwana, uye yepamusoro chengetedzo ratings. Vatengi vanogona kusarudza kubva kudivi neshure kupinda newiricheya mavans ane simba kana bhuku remanyorerwo ramp kuti uwane nyore kupinda nekubuda mumotokari. Minivans vane yakaderera nzvimbo yegiravhiti uye kutyaira senge mota ichivaita iwo anonyanya gasi anoshanda uye nyore kutyaira. Mimwe minvans senge iyo mavhiri ewheelchair inopihwa neAMS Vans zvakare inopokana nekudiwa kweanodhura nzira yekupfugama nekuwedzera iyo ramp 4 inches. Izvi zvinoponesa mutengi zviuru zvemadhora maringe nemamwe marudzi emunyika.
Mawiricheya muFull Size Vans
Zvizhinji zvemasvosve ekushandura emahara anoshandisa lift kwete a ramp. Simudza masisitimu anodhura zvakanyanya kupfuura ramp pamusoro pemotokari pachayo iri kudhura kupfuura minivan. Mavhiri akakwana akavakirwa pane chassis yerori, ichiita kutyaira uye maneuverability zvinonetsa zvakanyanya. Mavhare akazara ane zvigaro zvemutungamiriri kana zvigaro zvebhenji. Izvi zvinomanikidza mutengi kusarudza zvishoma passenger zvigaro kana mabhenji ayo muchengeti aifanira kukambaira pamusoro kuti asvike pa passenger. Zvakare, akakwana saizi maveni ane yakaderera kwazvo gasi mileage uye yakakwira nzvimbo yegiravhiti. Izvi zvinoita kuti vadzikame pane minivan. Mazhinji akakura akakura mavans anotakura iyo yekuwedzera mari yekuda mikova yekumashure yakawedzeredzwa kuti igone kukwidza kana ramp uye pamwe denga rakasimudzwa. kushandisa a ramp zvinogoneka nemahombekombe akakwana. Zvisinei, izvi inoda nzira yekupfugama, iyo inowedzera zviuru kukutendeuka kwako kunowanikwa.
MaSUV anoshamisira, anozivikanwa, uye kazhinji anouya akajairwa nemana mavhiri ekutyaira mumugwagwa. Iyo yakaderera gasi mileage, yakakwira inishuwarenzi mitengo, uye isina kugadzikana yakakwira nzvimbo yegiravhiti hazviiti kuti ive yakakodzera kutengeserana. Kuita kuti SUV isvike zvakanyanya zvinodhura nekuwedzera chinja zvigaro, kupfugama masisitimu uye anodhura asingavimbike hitch akaisa ma lift. MaSUV akakura kana kukura kupfuura minivan. Nekudaro, yakawanda yenzvimbo yenhumbi inotorwa neinogara zvigaro zve vafambi. Paunongoburitsa mushandisi kunze kwechigaro uye pachigaro uye chengeta iyo wiricheya munzvimbo diki diki kumashure kwetakura, nzvimbo yako yekuchengetera inotemwa nepakati.
Nepo mota dziripo kazhinji yakanaka pane gasi, nyore kutyaira, uye yakashongedzwa, kushandisa imwe seinowanikwa kutakura zvinogona kuoma. Sezvo ivo vari pasi pasi, vachibuda kunze kwe wiricheya uye mumotokari unogona kuisa wiricheya mushandisi panjodzi. Iye munhu ari kubatsira ari panjodzi ye kuipa naizvo. kushandisa a mota inoda iko kushandiswa kwe foldable wiricheya, mumwe wiricheya inotakurika izvo hazvireve kuti zvinopa zvakafanana zvakagadziriswa nyaradzo senge izvo zvemushandisi wiricheya iye / anoshandisa nguva dzese. Kamwe a wiricheya inotakurika inopinda mutangi, haibatsiri nenzvimbo yese chigaro chinotora.
Midhudhudhu inonakidza, inochengetedza zvakatipoteredza mota dzinogona kuchinjika kune a wiricheya mushandisi. Vanoshandisa wiricheya vanogona kutenga kuwedzera pamapakeji kuti vatyaire kubva pachigaro chavo, votsvedza kubva pachigaro chavo pachigaro chakajairika chemudhudhudhu chinochengetwa mukati mekusimudzwa kwakanamirwa kumashure kwebhasikoro, kana kukwira pachigaro chavo pfuti nepfuti mota. Kunyange chiri chinhu chinonakidza chekuvaraidza, nzvimbo zhinji dzenharaunda hadzifambise gore rese mudhudhudhu. Izvi zvinodaro nekuti iwe nechigaro chako munowoneswa nenjodzi. Tsaona dzemidhudhudhu dziri pakati pezvinotyisa mumugwagwa. Midhudhudhu haina kukomberedzwa nesimbi furemu, uye haanyatso kuoneka kune vamwe vatyairi. kushandisa mudhudhudhu wekuti usvike kutakura inobvumira hwiricheya user uye pamwe mumwe mutasvi kuti aishandise panguva imwe chete. Izvi zvinoita kuti kuita kwakawanda kwemotokari kuve kushoma.
Tora matori ane imwechete isina kugadzikana nzvimbo yegiravhiti uye yakaderera gasi mileage seSUVs. Kuendesa mukati nekubuda mukatori yetiraki inoda iyo chinodhura kuchinjisa chigaro kana robotic system. Kunyangwe nekutengwa kwedhora rakakura mambo kana akawedzeredzwa marori emota, mumwe munhu anofanirwa senga ari hwiricheya mumubhedha wetiraki. Izvi zvinofumura iyo wiricheya kune izvo zvinhu, zvichikosha kudzikisira cheya cheya upenyu. Kutsvaga iyo mota yewiricheya yakanakisa chako, mhuri yako, kana bhizinesi rako rinogona kunge riri basa rinotyisa, asi iwe uri munzira kwayo yekuita sarudzo chaiyo uye kunakirwa kufamba rusununguko rwakakodzera.
Kana iwe ukaona ichi chinyorwa chichibatsira, ndapota sununguka unzwe kuti ubatanidze kana kuishandisa zvakare. Zvese zvatinokumbira ndezvikwereti kumashure kwedu saiti.Chinyorwa ichi chinounzwa kwauri na 1800wheelchair - Iyo hwiricheya chitoro.
Chidimbu chaStephen Hawking
Zvinobatsira Zviwanikwa Zvekukwegura